Zaka tsara: tsy miverin-dalana… | NewsMada
Zaka tsara: tsy miverin-dalana…
Efa ao anatin’ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika, hatao ny 7 novambara, izao. Amin’izany, mbola misy ihany ny manao hetsika momba izay fifidianana izay. Tsy inona fa karazana fitakiana amin’izay tokony hanemorana ny fifidianana noho ny tsy fanjariana amin’itsy na iroa.
“Misy mihaino?”, hoy ny fitenin’ny tanora ankehitrio. Amin’ny fomba ahoana? Tongotra mby an-dakana, tsy afa-miverina intsony. Raha tsy izany, potraka na hisavoritaka eto… Ahoana izany? Politika io, ady fiady: miankina amin’ny fifandanjan-kery ihany. Mitsoka mankaiza ny rivotry ny tantara amin’izao?
Na ho inona aloha izay mety ho tohiny sy vokany amin’ny ahiahy etsy sy eroa, tsy afa-miverina intsony. Rehefa tsy azo iverenan-dalana ny raharaha na tsy te hiverin-dalana ny maro anisa amin’izay fifandanjan-kery izay, sao ny tena mahita izany ho tsy mety no mila miverin-dalana na miala an-daharana?